Malware Attack. Nzira Yokugadzirisa Sei Nyaya - Semalt Tips
Nik Chaykovskiy, Mutungamiriri Mukuru weVatengi vekubudirira ( Semalt , anoti mavirusi uye malware mapurogiramu akaoma kwazvo, zvinotora nguva yakawanda nesimba kuti zvibvise. Dzimwe nguva hatigoni kubvisa zvinhu izvi, uye zvinoramba zvichipararira kubva pane imwe faira kuenda kune imwe.
Hazvingave zvakakanganisika kutaura kuti zvigadzirwa zvekare zvekare nehupurogiramu hazvibvumirwe uye zvakavimbika. Maererano nemushumo weKuenzanisa, sangano rinotarisa uye rinoshandisa zvigadziro zvakasiyana-siyana zvekuchengeteka, iyo yakanakisisa yehutachiona software yakabata kwete 98% ye malware uye mavhairusi - horizon tech arctic turbo review. Mazana kusvika kune zviuru zvemavirusi uye maitiro avo ari kushanda paIndaneti, saka kuziva uye kubvisa zvose zvese kwakanyanya. Nhamba dzakawanda dzinotaridzika dzinoratidza kuti nhamba yakawanda yehutachiona hwepurogiramu haina chakanaka.
Kana kambani yako yakatapukirwa, zvinova zvakaoma iwe kuziva huwandu hwekukuvadza kunoitwa kumagadzirirwo ekushanda. Kunyange nyanzvi dzemakombiyuta haigone kukupa dhi rakarurama uye ruzivo. Mumamiriro ezvinhu akadaro, zvinenge zvisingakwanisi kwatiri kuziva nzira yekugadzirisa nekudzorera zvakakanganiswa mafaira. Mamwe mavairusiya anopinda pakombiyuta yako uye anogadzira matambudziko mazhinji, kusanganisira rootkits. Kana iwe uine mukana nokuti computer yako system yakachengeteka kubva kumirwere uye malware, unofanira kutora matanho nekukurumidza.
Nzira Yokudzivirira Sei Virus uye Zvimwe Zvirwere
Zvakakosha kuziva zvose nezvemarware uye mavairasi tisati taita zvinopesanaivo. Dambudziko revharegi inoshandiswa kwenguva pfupi yezvirongwa zvakasiyana siyana zvemakombiyuta zvisina kunaka uye zvishandiso. Iwe unofanira kunge wakanzwa nezve rootkits, spyware,mavairasi, neTrojans. Zvose zviri maitiro akasiyana-siyana e-malware uye anofungidzirwa akaipa pamakombiyuta ako. Malware yakasikwavose vari vaviri nevadzidzi vekoroji. Kunyange nyanzvi dzemakombiyuta dzinovasika nekubatsira kwezvirongwa zvakasiyana. Ikoko kune mapoka mapoka emakombiyutanyanzvi uye nyanzvi dzinotarisira kukanganisa nhamba yakawanda yemashandisi emakombiyuta uye kukumbira rudzikinuro. Vanoramba vachitsvaka rubatsiro rwenyu rwemagariro evanhu,tsananguro yemakadhi echikwereti, uye mamwe mashoko evanhu. Iwe unofanirwa kurega kushandisa zvinonyadzisira uye webheji yewebhu. Zvakakoshawo kuti iwe usadonhazvinyorwa zvisingatauri zvema email, kudzivirira matanho ekugovana-mafaira, software isiri pamutemo, mavhidhiyo nemimhanzi mawebhusayithi. Mimwe mienzaniso yakakurumbira ndeyeBitTorrent, Frostwire,uye Limewire. Usavhura maizai akabva kuAIDS asina kuzivikanwa. Iwe unofanirwawo kudzivisa kubatanidza hukama hwavo kunze kwekuti iwe uine chivimbo chokuti ivoakachengeteka. Iwe haufaniri kukanda mafaira kubva kune nzvimbo dzisina kujairika. CNET, Tucows, SourceForge, uye FileHippo mawebsite akachengeteka uye anogona kushandiswa chero nguva. Iwehaufaniri kuvhara pamabhandi ekutsvaga sezvo angave ane virusi uye malware.
Zvakakosha kuti iwe ushandise mapurogiramu chaiwo echokwadi antivirus. Gadzira mapurogiramu akasiyana-siyana uye shandisa mhando dzakasiyana-siyana dzekombiyuta pakombiyuta yako. Avast muenzaniso wakakwana weiyo; iri kushandiswa nevakawanda vanhu pasi rose. Paunenge uchishandisa zvinyorwa zvemashoko ezvehupfumi zvakadai sa Facebook, haufaniri kubvuma zvikumbiro zvemhuri kubva kuvanhu vasingazivikanwi. Ita maWindows updates kuti aise uye adzinge zvinyorwa zvitsva nguva dzose. Zvizhinji zvemashanduro aya anouya nekuchengetedzwa kwakakwana kwekuti iwe unogona kuvimba nemavhesi. MySpace ne Twitter zvinogona kuva nezvimwe zvisingachengeteka maitiro emitemo, saka unofanira kungwarira paunenge uchishandisa iyo mawebhusayithi evekutandara.